Ọkachamara Semalt kọwara Ụwa kacha elu 10 Spammers 2017 Maka Ị Nọrọ Nchekwa
Ọtụtụ nde ndị ọrụ ịntanetị na-eche banyere spam kwa ụbọchị. Maka onye ahụ a maara nke ọma, emelitere ozi ọhụụ ọ bụla na igbe mbata ahụ. Ọnụ ọgụgụ na-egosi na spam na-agbasa site na email. Na November 2016, ozi gbasara spam gụnyere pasent 61.66 nke ozi ahia n'ụwa niile. Nke a pụtara ihe dịka 82 ozi ịntanetị spam na-ekesa ụwa kwa ụbọchị. O nwere ike iju gị anya na ihe dị ka pasent 80 nke spam na-eme site na obere ìgwè ndị omempụ siri ike.
Frank Abagnale, Onye Nlekọta Ndị Na - ahụ Maka Ndị Nlekọta Semalt , na - akọwa ụwa kacha elu 10 nke spammers na 2017 ka ị nọrọ n'enweghị nsogbu.
1.Canadian ahịa ọgwụ
Onye na-ere ọgwụ Canada nwere ike ịbụ onye na-ere ọkụ spam nke ụwa. Ekwenyere na ọ dabeere na Ukraine / Russia, ọ na-ejikwa usoro botnet dị iche iche na weebụ weebụ gọọmenti China iji gwọọ netwọk ma gbasaa 'ọgwụ spam'. N'ime ọtụtụ nde ọnya ọ na-eziga kwa ụbọchị, ọkpụkpụ Canada na-ere ọgwụ onwe ya dị ka ebe kachasị mma na-emepụta ọgwụ na ọgwụ ndị nwoke.
2. Michael Boehm na Associates
Nke a bụ nzukọ nke spam na-acha uhie uhie nke na-arụ ọrụ n'okpuru ọtụtụ ndị dị iche iche na aha ahịa. Ọ na-eji ọtụtụ dịgasị iche iche nke ọnụ ala, ngalaba akpaaka na VPS Bochum IPs iji na-agba ọsọ nke nnukwu spam.
Ọkpụkpụ snowbhoe spammer Kobeni Solutions dabeere na Florida ma kwenyere na ya na onye ọlụlụ-na-mpụ nke Darrin Wohl, onye a ma ama ROKSO spammer. Na afo 2014, e nyere Yair Shalev iwu ịkwụ ụgwọ $ 350,000 na Federal Trade Commission (FTC) na uwe nke jikọtara ya na izipu ozi-e spam maka ndị na-azụ ahịa n'oge oge Obamacare. Na ozi ịntanetị, ọ dọrọ ndị nnata aka ná ntị na ọ bụrụ na ha agaghị anakọta njikọ njikọ ahụ ozugbo iji zụta atụmatụ mkpuchi, ha ga-emebi iwu.
4. Dante Jimenez nke Aiming Invest
Spammer a na - arụ ọrụ na ụfọdụ n'ime ndị na - agba chaa chaa botnet kacha njọ. Tinyere ndị ya na ha na-akpakọrịta, Dante na-eji ndị ọrụ hacked na phony hosters na Eastern Europe iji tinye nnukwu botnet spamming.
Alvin Slocombe ugbu a spams iji ọtụtụ aliases gụnyere Brand 4 Marketing, Site Traffic Network, Ad Media Plus, eBox, na RCM Delivery. dị iche iche saịtị na ụlọ ọrụ nyochaa spam.
Netwọk iMedia bụ Lindsay's hosted host for spamming operations. Ọ na-enye Bochum Bochum ka ndị cybercriminals ndị a ma ama ROKSO. Ndị ahịa nke Lindsay na iMedia Networks jiri botnet zombies ma weghachite spam payloads offshore. Nke a na spammer na ndị òtù ya na-ezigara adreesị IP ohere site na ụlọ ọrụ ruo ogologo oge ma jiri ohere a na spam.
7. Petera Severa (Peter Levashov)
A na - amara na cybercriminal nke a na - eto eto Russia bụ otu n'ime ndị na - agba ọsọ na - Ọdịiche ya bụ ide na ịzụta spamware na botnet ohere. A na-enyo enyo na ya ga-etinye aka na ịmepụta trojan na nje. Severa nwere mmekorita ya na otutu ndi Spammers na mba Europe na Eastern Europe. Ọ bụ onye mmekọ nke Alan Ralsky, bụ onye Spammer a mara ikpe ikpe.
Dabere ma kwenye na ị na-agba ọsọ site na Huntington Beach, USA, RR Media bụ nnukwu onye na-agba afa spam na-eji aha dị iche iche amalite ọrụ ya. Ihe ndị ahụ e dere ede gụnyere ịnye ozi ịntanetị na-ezighị ezi maka ụmụaka na-etinye ha n'ịṅụ mmanya na ịgba chaa chaa.
A mara Michael na February nke afọ a mgbe a chọpụtara ya na ya na ndị na-arụ ọrụ na steeti gọọmenti etiti na-arụ ọrụ. Mkpesa ahụ kwuru na spammer a ji igwefụfụ igwefụfụ (na-eji otutu ngalaba na IP) ezipụ ọtụtụ nde ozi ịntanetị na ọ dịkarịa ala 9 netwọk.
10. Yambo Financials
Nzukọ spam a na-eme mkpesa na-emetụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ọ bụla nke spamming. Ọ na-abanye n'ime sava ọha na eze, na-ewepụ ha ma na-eme ha iji kwalite ngwanrọ na ọgwụ ntanetị na ọbụna kesaa nwatakịrị, ịgba akwụna na ụmụ anụmanụ na-akpali agụụ mmekọahụ. Onye Spammer nke Ukraine na-azọrọ na ọ na-enye "ọrụ ego".
Site n'ịgbawanye spam na spammers site na iji usoro ndị ọzọ siri ike dịka botnets, onye ọ bụla ịntanetị chọrọ ịkpachara anya mgbe ọ na-edebe ihe n'Ịntanet. Ọ dị mma ịzụlite ma nọgide na-enwe obi abụọ mgbe ị na-emepe ozi ịntanetị ọhụụ ebe ọ bụ na a na-ezigara ọtụtụ n'ime spam email. Ịchọghị ịda onye ọ bụla nke n'elu ma ọ bụ ndị ọ bụla spammers.